Sterilizer Ultraviolet tsara indrindra ho an'ny mpanamboatra rano sy ozinina | Manfre
Sterilizer ultraviolet ho an'ny fitsaboana rano
Ny sterilizer Ultraviolet dia be mpampiasa ary misy lanjany lehibe amin'ny fitsaboana rano. Manimba sy manova ny firafitry ny zavamiaina bitika ao amin'ny ADN amin'ny alàlan'ny fanaparitahana hazavana ultraviolet, ka maty avy hatrany ny bakteria na tsy afaka mamerina ny zanany hahatratra ny tanjon'ny fanamorana. Ny taratra ultraviolet ZXB no tena vokatry ny bakteria satria ny taratra ultraviolet C-band dia mora voan'ny ADN amin'ny zavamiaina, indrindra ireo taratra ultraviolet manodidina ny 253.7nm. Ny famonoan-tena Ultraviolet dia fomba famonoan-tena ara-batana fotsiny. Izy io dia manana tombony amin'ny tsotra sy mora, spektrum malalaka, fahombiazana avo lenta, tsy misy fandotoana faharoa, mora fitantanana sy mandeha ho azy, sns. Miaraka amin'ny fampidirana ireo jiro ultraviolet vaovao natao isan-karazany, dia nitohy nitatra ihany koa ny volan'ny sterilization ultraviolet.
3) Fepetra takiana amin'ny endrika ivelany
(1) Ny fiparitahan'ny fitaovana dia tokony hofafazana mitovy, miaraka amin'ny loko mitovy, ary tsy tokony hisy marika mikoriana, mibontsina, mamoaka loko, na mibontsina amboniny.
(2) Ny fisehoan'ny fitaovana dia milamina sy tsara tarehy, tsy misy marika marotoa sy tsy fitoviana. Ireo metatra, jiro, jiro famantarana ary famantarana dia tokony hapetraka mafy sy mahitsy.
(3) Ny fametahana ny akorany sy ny rafiny dia tokony ho mafy orina, tsy misy fihoarana miharihary na kilema mandoro.
4) Hevi-dehibe amin'ny fananganana sy ny fametrahana
(1) Tsy mora ny mametraka ny mpamorona ultraviolet amin'ny fantsom-pivoahana akaikin'ny paompin-drano mba hisorohana ny fantsom-pitaratra quartz sy ny fantsom-panaovan-jiro tsy ho simban'ny tantanana rano rehefa mijanona ny paompy.
(2) Ny generator ultraviolet dia tokony hapetraka mafy mifanaraka amin'ny làlan'ny fidiran'ny rano sy ny fivoahana.
(3) Ny mpamorona ultraviolet dia tokony hanana fototra avo kokoa noho ny tany misy ny trano, ary ny fotony dia tsy tokony ho ambany noho ny 100mm avo kokoa noho ny tany.
(4) Ny generator ultraviolet sy ny fantsony mifandray ary ny valves dia tokony hamboarina mafy, ary ny generator ultraviolet dia tsy tokony havela hitondra ny lanjan'ireo fantsona sy kojakoja ilaina.
(5) Ny fametrahana ny lozisialy ultraviolet dia tokony ho mora amin'ny fanesorana, fanamboarana sy fikojakojana, ary tsy tokony hisy fitaovana misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny rano sy ny fanadiovana amin'ny fantsona rehetra.
Teo aloha: Sivana fanaovan-gazety tsy manara-penitra ho an'ny indostrian'ny ranomanitra
Manaraka: Sivana 3LA ho an'ny milina lamba lamba Barmag